Posted by တန်ခူး at 10:25 AM
ဒီလိုလား... အီးမေးလ်လည်း မသိတော့ မေးလ်ပို့ သတင်းမမေးဖြစ်ဘူး မတန်ခူးရေ.. ခဏခဏတော့ လာချောင်းပါတယ်။ အားလုံးကျန်းမာကြပါစေ။
အမတန်ခူးရေ မုန်းစရာဧည့်သည်ကြီးနော်။ အလိုက်မသိလာလည်ပြီး ဒုက္ခတွေပေးသွားတယ်။ ခုပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ ဝမ်းသာစရာကောင်းတာ။ သားလေးရော အတော်ပြန်သက်သာလာပြီဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ်အမရေ။ တအိမ်သားလုံး ပြန်လည်ကျန်းမာပျော်ရွှင်လာပါစေ။
နေမကောင်းဖြစ်နေလို့ အမ အသစ်တွေ မရေးနိုင်တာကိုး...
အခုအချိန်က နေမကောင်းဖြစ်နေကြတယ်... ကျွန်တော်လည်း တခါတလေ အအေးမိချင်ချင်ဖြစ်နေလို့ သတိထားနေရတယ်။
အခု အားလုံး ပြန်နေကောင်းလာပြီဆိုတော့ တော်သေးတာပေါ့။ ၀မ်းသာပါတယ်။
အစ်မရေ ပြန်ကျန်းမာလာပြီ ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ကလေးတွေ နေမကောင်းဖြစ်တာ သိပ်သနားဖို့ ကောင်းတယ်။
အစ်မရေ.. မကြာခဏလာချောင်းဖြစ်တယ် ။ နေကောင်းစပြုလာပြီဆိုပေမယ့် အားပြည့်အောင် နားနားနေနေ နေပါဦး ။ မိသားစုအားလုံး မြန်မြန်နေကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်နော် ။
Finally, ama family are fine.
အမတန်ခူးရဲ့ ဧည့်သည် ဒီကိုရောက်နေပြီလားမသိဘူး။သားလေးလဲ ညကတည်းကကိုယ်ပူနေတယ်။
အမရေ အဲ့ဧည့်သည်က ကျနော့ဆီ နှစ်ရက်တည်းသွားသေးတယ်ဗျ။
I am so glad to hear about that. Wish be happy and helathy!
ဟယ်..အခုချိန်မှာ ဖြစ်တော့ စိတ်ပူနေမှာပေါ့..။ ကလေးတွေက သနားဖို့သိပ်ကောင်းတာပဲ..အဲဒီလို နေမကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုရင်.. အခု သားအမိ သုံးယောက်စလုံးဖြစ်တော့ ပင်ပန်းမှာပဲ..အနားကောင်းကောင်းယူလိုက်ဦးနော်.. ကလေးတွေကတော့ ကျလွယ် တက်လွယ်ပါတယ်..။
တော်ပါသေးရဲ့.. ဒီလောက်နဲ့ ဒင့်က ပြန်သွားပေလို့..။ သနားပါတယ်.. သားလေး...
အခုတလော ရာသီဥတုကလဲ မကောင်းဘူး ပူလိုက်အေးလိုက်နဲ့...
တန်ခူးတို့နှစ်ယောက်လဲ နေကောင်းအောင်နေ.. အားရှိအောင် စားနော်...
သားသားရော မမတို့ရော မြန်မြန် ကျန်းမာပါစေ
မိသားစု အားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ
နေမကောင်းရင် သိပ်စိတ်ဆင်းရဲတာ။ အမတို့ မိသားစု မြန်မြန် နေကောင်းပါစေ..။
ကျနော့်ဆီလည်း အဲ့ဧည့်သည်က ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက်က ရောက်လာပါကောလား ခုတောင် ဆေးသောက်နေရတုန်း အစ်မတို့မိသားစုတွေ နေပြန်ကောင်းပြီဆိုတော့ တော်ပါသေးရဲ့ ။
ကလေးလေး သနားပါတယ်။ ကျန်းမာကြပါစေနော်။
ခုတော့ ဧည့်သည်လည်းပြန်တော့မှာပါ ..
ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ ..း)
ဟုတ်တယ်ဗျ... အအေးပတ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ဖလူးဖြစ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေက ကူးတာပဲ... တအိမ်ထဲနေလို့ကတော့ တယောက်ပြီး တယောက် လှည့်ကို ဖြစ်တာ... ကျနော်တို့ မိသားစုလည်း တခါ ဖြစ်လိုက်သေးတယ်... အငယ်ဆုံးကလေးကနေ စဖြစ်လိုက်တာ လူစေ့ပဲ... ဘာပဲပြောပြော သာမန်ဖြစ်တာပဲ ကံကောင်းတာပေါ့... မိသားစုဝင်အားလုံး ကျန်းမာကြပါစေဗျား...